Download I-Hd Engemuva (Yamaphephadonga) Apk Latest Version App For Android Devices
izinhlelo zokusebenzaUkwenza Okuthandwa Nguwei-hd engemuva (yamaphephadonga)
✔ Indawo lapho ungathola khona izizinda ezenza ujabule usuku lonke. -OGQ Imvelo izuzwe ukulandwa kwezigidi ezingu-120 emhlabeni jikelele!- Abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingu-2.4 banike izilinganiso ezingu-4.6 ku-5.0 futhi babhala...
4.6 (92.4%) 2,403,250 Amavoti
✔ Indawo lapho ungathola khona izizinda ezenza ujabule usuku lonke.
-OGQ Imvelo izuzwe ukulandwa kwezigidi ezingu-120 emhlabeni jikelele!
- Abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingu-2.4 banike izilinganiso ezingu-4.6 ku-5.0 futhi babhala izibuyekezo!
Izizinda ezintsha ezifaka amavidiyo, izithombe, imifanekiso kanye namawashi alayishwa nsuku zonke!
✔ Izinhlobo ezine zehlukile ze-OGQ Background!
[Ukubuka okubukhoma] Thola izithombe zokubuka zangempela ngemuva!
[Isizinda sangemuva] Setha isizinda sakho ngamavidiyo acacile!
[Image] Hlola izithombe zethu nemifanekiso evumelana nambitha yakho!
[Igalari] Jabulela igalari yethu eyenziwe abadali abaziwayo abavela emhlabeni wonke!
✔ Amaphuzu amahlanu akhangayo we-OGQ Background!
[Uzidalile] Layisha izithombe zakho namavidiyo azenzele bese uzama ukuthengisa!
[Ukunambitha kwami] Thola izizinda ezivela kumathegi anesithakazelo nabadali ku-feed!
[Ukuthandwa kwami] Chofoza 'uthanda' ezincekeni ozithandayo bese ulondoloza endaweni yakho!
[Iphrofayela yami] Vumela abasebenzisi emhlabeni wonke bazi mayelana nephrofayela yakho edalwe ngokusekelwe ukunambitheka kwakho!
[Asijabulele] Hlola izizinda ezivela kubantu abanambitha efanayo futhi baxoxe namazwana nemilayezo!
✔ isithembiso se-OGQ Backgrounds Abantu bahlola ama-smartphones abo nama-tablet PC ngaphezu kwezikhathi eziningi ngosuku. Yingakho izizinda zesikrini nokukhiya ekhaya kunomqondo obalulekile kithi sonke. Izizinda ziphathelene nabathandekayo bethu, ukuhamba kwethu kwangaphambili nabangani nezilwane zethu ezifuywayo ezingabangane bokuphila. Ukushintsha izizinda nje ukuvuselela noma ukwengeza izithombe zesitayela sakho ozithandayo kungenye yezindlela zokuziphatha isikhathi eside esiye senza njalo.
Izizinda zethu kungenzeka ukuthi azifani nezithombe ozithathile ngayo yonke inhliziyo yakho. Kodwa ngeke sikhohlwe ukuthi izizinda zisho ukuthini kithi. Sizokwenza konke esingakwenza ukuze sikunikeze izizinda ezibalulekile nsuku zonke!
✔ [Okudingekayo] Inhloso yokugunyazwa kokusetshenziswa kohlelo lokusebenza efuna imvume ngaphambi kokufakwa
[WRITE_EXTERNAL_STORAGE]: Lokhu yisigunyazo esidingekayo ukuze unike amandla izizinda ukuze zilondolozwe ekugcineni kwedivayisi yomsebenzisi.
[READ_EXTERNAL_STORAGE]: Leligunya elidingekayo ukuhlola izizinda ezilondoloziwe bese ulayisha izithombe ezikhethiwe kusuka ku-albhamu yomsebenzisi.
✔Siyathembisa ukuthi ngeke silondoloze noma sisebenzise ulwazi olubalulekile lwabasebenzisi futhi Sizokulalela njalo imibono yakho ehlonishwayo.
I-Copyright © 2011-2019 OGQ Corp., Inc. Wonke amalungelo agodliwe.